AeonCoin စျေး - အွန်လိုင်း AEON ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို AeonCoin (AEON)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ AeonCoin (AEON) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ AeonCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 700 201.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ AeonCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
AeonCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AeonCoinAEON သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.546AeonCoinAEON သို့ ယူရိုEUR€0.463AeonCoinAEON သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.418AeonCoinAEON သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.498AeonCoinAEON သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.94AeonCoinAEON သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.45AeonCoinAEON သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč12.19AeonCoinAEON သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.04AeonCoinAEON သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.73AeonCoinAEON သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.762AeonCoinAEON သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$12.22AeonCoinAEON သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.23AeonCoinAEON သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.97AeonCoinAEON သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹40.95AeonCoinAEON သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.91.65AeonCoinAEON သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.749AeonCoinAEON သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.827AeonCoinAEON သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿17.05AeonCoinAEON သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.8AeonCoinAEON သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥57.82AeonCoinAEON သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩649.11AeonCoinAEON သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦206.6AeonCoinAEON သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽40.24AeonCoinAEON သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴15.09
AeonCoinAEON သို့ BitcoinBTC0.00005 AeonCoinAEON သို့ EthereumETH0.00145 AeonCoinAEON သို့ LitecoinLTC0.00953 AeonCoinAEON သို့ DigitalCashDASH0.00566 AeonCoinAEON သို့ MoneroXMR0.00584 AeonCoinAEON သို့ NxtNXT40.32 AeonCoinAEON သို့ Ethereum ClassicETC0.0782 AeonCoinAEON သို့ DogecoinDOGE157.26 AeonCoinAEON သို့ ZCashZEC0.00588 AeonCoinAEON သို့ BitsharesBTS21.64 AeonCoinAEON သို့ DigiByteDGB20.29 AeonCoinAEON သို့ RippleXRP1.86 AeonCoinAEON သို့ BitcoinDarkBTCD0.0188 AeonCoinAEON သို့ PeerCoinPPC1.86 AeonCoinAEON သို့ CraigsCoinCRAIG248.27 AeonCoinAEON သို့ BitstakeXBS23.24 AeonCoinAEON သို့ PayCoinXPY9.51 AeonCoinAEON သို့ ProsperCoinPRC68.36 AeonCoinAEON သို့ YbCoinYBC0.000293 AeonCoinAEON သို့ DarkKushDANK174.71 AeonCoinAEON သို့ GiveCoinGIVE1179.25 AeonCoinAEON သို့ KoboCoinKOBO127 AeonCoinAEON သို့ DarkTokenDT0.503 AeonCoinAEON သို့ CETUS CoinCETI1572.36